Inhliziyo I-China 45liters Luxury Universal Detachable Motorcycle Tail Box abakhiqizi nabaphakeli |Kangxing
Igama Lomkhiqizo Ibhokisi le-MotorcycleTail Inombolo yemodeli. FD-12
Leli ibhuluki/ikesi eliphezulu lesithuthuthu esisha esisha elikhiphekayo, elinokhiye ababili bokukhiya i-trunk, kanye ne-base plate ukuze i-trunk ikhululwe ngokushesha.I-trunk ingavulwa futhi ikhishwe ku-mounting plate, futhi ihanjiswe ngapha nangapha njengepotimende.
Ubukhulu bangaphandle: 56.5(L)×41.5(W)×30(H)cm
Q1.Ithini imigomo yakho yokupakisha?A: Ngokuvamile, sipakisha izimpahla zethu emabhokisini amhlophe angathathi hlangothi kanye namabhokisi ansundu.Uma ubhalise ngokusemthethweni ilungelo lobunikazi, singapakisha izimpahla emabhokisini akho anegama ngemuva kokuthola izincwadi zakho zokugunyaza.
Q2.Ithini imigomo yakho yokukhokha?
A: T/T 30% njengediphozithi, kanye no-70% ngaphambi kokulethwa.Sizokubonisa izithombe zemikhiqizo namaphakheji ngaphambi kokuthi ukhokhe ibhalansi.
Q3.Ithini imigomo yakho yokulethwa?
Q4.Kuthiwani ngesikhathi sakho sokulethwa?
IMP: Ngokuvamile, kuzothatha izinsuku ezingu-15 kuya kwezingu-30 ngemva kokuthola inkokhelo yakho kusengaphambili.Isikhathi esithile sokulethwa sincike ezintweni kanye nenani le-oda lakho.
Q5.Ungakwazi yini ukukhiqiza ngokwamasampuli?A: Yebo, singakhiqiza ngamasampula akho noma imidwebo yobuchwepheshe.Singakha isikhunta kanye nezakhiwo.
Q6.Ithini isampula yenqubomgomo yakho?
IMP: Singahlinzeka ngesampula uma sinezingxenye ezilungile esitokweni, kodwa amakhasimende kufanele akhokhe izindleko zesampula kanye nezindleko ze-courier.
Q7.Ingabe uyazivivinya zonke izimpahla zakho ngaphambi kokulethwa?
A: Yebo, sinesivivinyo esingu-100% ngaphambi kokulethwa
Q8.Ulenza kanjani ibhizinisi lethu libe yisikhathi eside nobudlelwano obuhle?
A:1.Sigcina izinga elihle nezintengo ezincintisanayo ukuze siqinisekise ukuthi amakhasimende ethu ayazuza;
2. Sihlonipha wonke amakhasimende njengomngane wethu futhi senza ibhizinisi ngobuqotho futhi senze ubungane nawo, kungakhathaliseki ukuthi avelaphi.
Okwedlule: I-Motorcycle Scooter Tail Box I-Rear Itrunk Trunk Top Case
Olandelayo: I-FD-516 I-New Arrival DOT Standard Flip up Casco Motorcycle Helmet
Ibhokisi Lomthwalo Wezithuthuthu
Isithuthuthu Emuva Ibhokisi
Ibhokisi Lomthwalo Womsila
Ikesi Eliseceleni Lezikhwama Zesithuthuthu Esithengiswa Kakhulu eline...
Isithuthuthu Trunk Box Scooter Trunk Tail Box Mot...
Ibhokisi Lempahla Lokudala 350 Izithuthuthu Performance Izingxenye Comie Motorcycle Tour Tail Box Ikesi leAtv Isithuthuthu Side Luggage Box Ibhokisi Lomthwalo Womsila